VeZanu-PF neMDC Votatsurana paNyaya yeGwara Rekugadzirisa Nyika
Ndira 02, 2020
Mamwe mapato anopikisa hurumende yemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo aakaitwa nehurumende mugore ra2019, kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika, pamwe nekutekeshera kwehuwori panguva iyo bato riri kutonga reZanu PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise misoro pamwe chete azeye zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti Polad.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotingamirwa naVaNelson Chamisa, iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999, rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yaVaEmmerson Mnangagwa.
Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra2019, kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remitemo yenyika.
Mutevedzeri wemutauriri webato iri, VaLuke Tamborinyoka, vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kwehutungamiri hwebato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Gore rino hurumende yaVaMnangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzemadzishe kubudikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita Ishe Nhlanhlayamangwe Ndiweni vekuNtabazinduna mudunhu reMatabeleland North, avo vayakabvisa pahushe.
Hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta aimirira vasungwa. Izvi zvakashorwa nemutungamiri wesangano reZimbabwe Mass Movement, VaAlbert Matapo, avo vakambosungirwa nyaya dzekuda kupidigura hurumende.
VaMatapo vanoti hurumende yaVaMnangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yamushakabvu VaRobert Mugabe, avo vakazosiya basa muna 2017 kubudikidza nekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
VaTamborinyoka vanoti VaChamisa havasi kuzopinda munhaurirano pasi pechirongwa chevari munhaurirano dzevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa naVaMnangagwa, chiri kudaidzwa kuti Political Actors Dialogue, kana kuti Polad.
Zvichakadai, imwe nhengo yeZanu PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, VaEnergy Mutodi, vanoti VaChamisa kana vasingadi kupinda munhaurirano naVaMnangagwa ngavagare zvavo sezvo bato reZanu PF riri iro rakakunda musarudzo dzemuna 2018, idzo dzavanoti dzakaitwa zviri pachena.
Nekune rumwe rutivi, VaChamisa vanoti nhaurirano dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi gava akamabove mutungamiri weimwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino sezvo vachiti VaMnangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano ipo paine gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera, dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi VaMutodi vanoti zviri kutaurwa neMDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZanu PF.
VaMutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023 sezvo vachiti bato ravo sehurumende vari kuedza kugadzirisa matambudziko ari kutarisana neveruzhinji munyaya dzezvehupfumi.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa, reLabour Economists and Afrikan Democrats, Muzvare Linda Masarira, vanoti hapana pavanokwana munhaurirano dzePolad kana pasina hurongwa hwekugadzirisa nyaya dzehuwori uhwo hunonzi naVaMnangagwa hwatekeshera munyika.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZanu PF, kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yemubatanidzwa zvakare.
Vaimbove mutungamiri weSouth Africa, VaThabo Mbeki, avo vaive mutongi gava akatumwa nesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC panhaurirano dzakazokonzera kuti VaMugabe namushakabvu VaMorgan Tsvangiri vaitungamira MDC vaumbe hurumende yemubatanidzwa muna 2009, vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Zvichakadai, imwe nhengo yeboka revechidiki reZanu PF Youth League isina kuda kudomwa nezita, inoti dambudziko remuZimbabwe richanetsa kugadzirisa sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muhutungamiri uye muine zvikwata-zvikwata muZanu PF.
Vamwe vanoti kunyange hazvo VaMugabe vakafa muna Gunyana gore rino, kufa kwavo kwakatowedzera bopoto muZanu PF sezvo mhuri yavo yakaramba kuti VaMnangagwa vavige mushakabvu uyo akazovigwa kumusha kwake kwaZvimba.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZanu PF vanoti pane kusawirirana pakati paVaMnangagwa nemutevedzeri wavo, VaConstantino Chiwenga panyaya dzemasimba, asi VaMnangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitirwa kuGoromonzi kuti izvi ndezvemugotsi matsuro.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaPhilani Zamchiya, vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere, panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanobata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
Asi VaMnangagwa pachavo vakati Zanu PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika sezvo yakavhoterwa neveruzhiinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nehuwori dzagadziriswa, hupfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo.
Paramande Yoshora Bazi reZvedzidzo paNyaya Yekumbunyikidzwa kweVadzidzi